2021 IWCA Inoshanda @ CCCC - International Writing Centers Association
Zuva: Chitatu, Kubvumbi 7, 2021 kubva 10am kusvika 4:15 PM
chirongwa: Ndokumbira kuti uone iyo 2021 IWCA Pamhepo Kubatana Chirongwa kuti uwane ruzivo nezve zvikamu zvega.
Mamiriro: Synchronous Zoom Zvikamu uye Asynchronous Mavhidhiyo. Nezve mirayiridzo yekuvandudza inowanikwa inowanikwa kana asynchronous mharidzo, ona iyo IWCA Remote Presenter Yekuwana Nhungamiro.
kunyoresa: $ 15 yevanyanzvi; $ 5 yevadzidzi. Kushanya wqmisik.org kunyora.
Kana usiri nhengo, iwe unotanga iwe kujoina sangano. Kushanya wqmisik.org kujoina sangano.
Nhengo yevadzidzi i $ 15.
Unhengo hwehunyanzvi i $ 50.
Nekuti chikamu chedu chezvematongerwo enyika chakanyanyoenderana neWPAs, tinokoka nzvimbo dzisiri-dzekunyora dzeWPA kuti dzibatane nesangano padanho rehunhu hwevadzidzi ($ 15) yenhengo yezuva rimwe chete yekupinda kuCollaborative. Mushure mekujoinha, ivo vanofanirwa kunyoresa for chiitiko pazinga rehunyanzvi ($ 15).
Plenary chiitiko naCourtney Adama Wooten, Jacob Babb, Kristi Murray Costello, naKate Navickas, vapepeti ve Izvo Zvinhu Zvatinotakura: Maitiro Ekucherechedza nekutaurirana Zvemhepo Basa Mukunyora Chirongwa Chekuita
Zvigaro: Dr. Genie Giaimo, Middlebury College, uye Yanar Hashlamon, Ohio State University
dingindira: Nzvimbo dzekubata muKunyora Center Basa
Mupfungwa yakanaka, nzvimbo dzekutaurirana inzvimbo dzatinowana kubvumirana uye zvakajairika pakati pekusiyana. Muchokwadi, isu tinovavarira asi pamwe hatizvitore. Pakati pekushungurudzika kwazvino nekusangana nevanoenda kune imwe nyika mune yedu mamiriro ezvematongerwo enyika, zvakakosha kuti tizive kuti nzvimbo dzekukura nemukana wevamwe nzvimbo dzekushandisa nekubvisa vamwe. Nyika yeboka remukana mukana ndeimwe yekutorerwa imwe.
Tichiisa izvi mundangariro, tinokurudzira kuti nzvimbo dzekubata ndeyakakodzera modhi kuburikidza nekuongorora kusagadzikana mukunyora nzvimbo yebasa uye dzidziso. Nzvimbo dzekutaurirana "inzvimbo dzekudyidzana uko tsika dzinosangana, kupesana, uye kukwikwidzana, kazhinji mumamiriro ehukama husingaenzanisike hwesimba" (Pratt 607). MuKunyora Center basa, nzvimbo dzekubata dzakaiswa nevanoverengeka vevadzidzi mukati memakumi maviri emakore apfuura, vachizvivakira nzvimbo pachavo se "miganhu," kana mitauro, tsika dzakasiyana, uye nzvimbo dzakasiyana dzekudyidzana (Severino 1994; Bezet 2003; Sloan 2004; Monty 2016 ). Dzimwe nyanzvi dzakagadzira nzvimbo dzekunyora sedzinonetsa uye postcolonial nzvimbo dzekubatana dzevanyori vakasiyiwa kuti vazvimise ivo pachavo maererano nehurukuro huru (Bawarshi naPelkowski 1999; Wolff 2000; Kaini 2011). Romeo García (2017) anonyora kuti Writing Center nzvimbo dzekutaurirana dzinowanzo kuverengerwa seyakamira uye inomiririra kusaenzana sekugadziriswa kana mhirizhonga dzinogadziriswa kana kugadziriswa (49). Kuti tigadzire nzvimbo dzakaperera, tinofanirwa kuongorora kusagadzikana kuri pabasa redu nekutarisana nenzvimbo dzekuonana sekuchinja uye nhoroondo yakavakirwa. Nhoroondo nenzvimbo dzekusaruramisira zvinodaidza kutarisisa kwedu kumasangano emakambani uye kusimba kunoumba basa redu; maitiro uye dzidziso zvingave zvinopesana nemumwe pabasa redu; mashandisiro atinoita vashandi vedu nevatengi uye vatengi ruzivo rwekunyorera nzvimbo uye yekunyora nzvimbo tsika; uye masisitirwo emasangano anokanganisa maitiro ehunhu mukunyora nzvimbo yekudzidzisa. Mune mamwe mazwi, isu tinofanirwa kufunga nezvekuti nzvimbo dzekutaurirana mukati nenzvimbo dzakapoterera dzekunyora, senzvimbo yakakura, Hurumende, hurumende, nemamwe masimba emagetsi zvinokanganisa basa redu nemaitiro edu.